I-UAE kwi-Fast track | Imisebenzi - Umsebenzi - Ukuhamba Okuvulelekile Kwezinto ezintsha nokudala
Indlela Yokuthola Umhumushi WaseChina e-Dubai?
I-UAE yeza kuqala emhlabeni jikelele ku-Practices Management, okwesibili ku-International Trade, Ukukhiqiza kanye nokusebenza kahle, isisekelo sezingqalasizinda, izimo zengqondo nezindinganiso kanye nesithathu emhlabeni jikelele ku-Public Finance and Policy Tax.
I-United Arab Emirates, i-UAE, iye yagcina ukuhola kwayo esifundeni futhi ibeka inani lesihlanu emhlabeni jikelele ekuncintisana komhlaba wonke, ngokusho kwe-World Competitiveness Yearbook 2019, eyanyatheliswa yi-Swiss-based International Institute for Management Development, IMD. Namuhla "UAE ingena ezinhlanu ezinhlanu okokuqala," kusho i-IMD World Competitiveness Rankings.
I-2021 - 2030: I-UAE izobe ifinyelele i-Abu Dhabi Economic Vision 2030, i-Environmental Vision 2030 (Abu Dhabi), Hlela i-Abu Dhabi 2030, Isu lokuphatha ukuhamba kwe-Abu Dhabi, Uhlelo lwe-Surface Transport Master (Abu Dhabi), i-Dubai Autonomous Transportation Strategy, Dubai Isu sezentengiselwano 2030, i-Dubai 3D Isu lokuprinta kanye ne-UN ye-2030 Agenda. (I-Portal of UAE Government)
Ungakhohlwa izakhamizi ekuhambeni okusheshayo kuya kwi-Smart Future.
Lesi setha esiphezulu sezimiso zomhlahlandlela wesikhathi eside sikhombisa yonke imisebenzi futhi sigweme izinguquko ezincane zesikhathi esisezingeni, singabona kwezinye izifunda zomhlaba.
Amandla azalwe ngoCalmness
Cishe wonke umuntu uye wabhekana nesikhathi esithile noma eminye ekamelweni lokuhlangana emhlabeni jikelele: Ukudumisa imikhiqizo emangalisayo, izinsizakalo ezinhle, i-Olympus yekhono elenziwe yi-elite yomsebenzi webhizinisi.
Okunye okuhlangene nakho okuhlangenwe nakho okujabulisayo esimweni senhlonipho nokulalela okusebenzayo. Umhlanganyeli ngamunye uyashiya iseshini yobuciko nokukhula kolwazi.
Isinyathelo sibheke esikhathini esizayo esisekelwe ngamagugu amasiko.
Endleleni eya ku-UAE eluhlaza
Amazwe acebile amafutha we-GCC aqala ukuhamba aluhlaza futhi azinikele ekutheni ahlukanise umnotho wabo ngaphandle kwamafutha. Nakuba umshayeli oyinhloko womzamo wokunciphisa ukunciphisa amathuba okuwa kwamafutha wezwe, izizwe ze-GCC nazo zizama ukubhekana nesidingo sokukhula kwesimo sezulu.
Ukubukwa kwansuku zonke ezimemezelweni zethenda kubonisa inani elikhulayo lemiklamo eluhlaza esifundeni. I-UAE isendleleni yokunciphisa ikhanda le-carbon.
Ungakhohlwa ukuguquguquka kwesimo sezulu.
I-Dubai yahlala yindawo ekhangayo emhlabeni jikelele ukutshalwa kwezimali okuqondile (FDI) njengoba kubhalwa ukukhula kwe-41 ngonyaka ngonyaka ngonyaka we-FDI ku-Dh38.5 billion, ukubeka umbuso esikhundleni sokuqala kwinani lamaphrojekthi amaningi e-FDI nokugeleza kwezimali . (Khaleej Times)
Ukubuka ngaphandle kwefasitela emgqeni wokubomvu we-red line kuyisitatimende esimangalisayo samandla omnotho. Izibonakaliso zokuqala zokusungula abadlali bomhlaba wonke ziseduze, kodwa kusekhona okuningi okumelwe ukwenze.
Ukuthengisa ubuchwepheshe bendawo emakethe yezwe kuyisinyathelo esibalulekile esilandelayo.
Intsha enomthwalo wemfanelo
"Iminyaka eyishumi nesishiyagalombili edlule ibone ukukhula okukhulu kwenani labafundi baseMpumalanga Ephakathi abaqeda okungenani ingxenye yemfundo yabo yunivesithi phesheya. Njengoba inani labafundi basemhlabeni jikelele likhuphuka unyaka ngamunye, izizwe zaseMpumalanga Ephakathi azigcini ngokuhamba, kodwa zandisa ukuma kwazo. "(TopUniversities.com)
Ukuvakashela amanyuvesi ahlomile esifundeni kuyinto ejabulisayo. Eyaziwa kahle kahle, lezi yizindawo ongahlangabezana nazo ezivulekile, abantu abafunde kahle. Izingxoxo ngekusasa ngezinguquko ziyinto ecebisa futhi ivula ama-horizons omuntu siqu nezobuchwepheshe.
I-UAE ichaza indlela yokusebenzisa ikhono lesizukulwane esincane. "UMhlonishwa uShamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, oneminyaka engu-22, wamiswa njengoNgqongqoshe WezeMpilo we-UAE eNkulumeni entsha, wamemezela ngoFebhuwari 2016. Ngakho, uyinceku encane kunazo zonke emhlabeni. Imisebenzi yakhe igxile ekwakheni izinkinga zentsha kanye nezifiso eMkhandlwini weNgqongqoshe, ukuhlela izinhlelo zokuthuthukiswa kanye namasu okuthuthukisa amakhono abasha, ngaphezu kokusebenzisa amandla abo ezindaweni eziningi. "(United Arab Emirates, IKhabhinethi)
Ungavumeli ukudlulisa isipiliyoni sempilo.
"I-Dubai-Abu Dhabi i-12-minute i-Hyperloop evuliwe yi-2020" - "Ukwakhiwa kwamaphrojekthi amaningi e-solar (CSP) amakhulu kakhulu emhlabeni wonke aqale e-United Arab Emirates (i-UAE)." - "Ngaphansi kweziqondiso zakhe Ukuphakama uShaikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum, Vice-President kanye nongqongqoshe we-UAE noMbusi wase Dubai, i-Dubai Future Foundation ngokubambisana I-Dubai's Roads and Transport Authority Iqalise 'i-Dubai Autonomous Transportation Strategy'. "-" Isu lokuphrinta i-Dubai 3D sizokwenza i-Dubai ibe yi-hub yokunyathelisa ye-3D yezwe. "
Siphila esikhathini sokuphazanyiswa, lapho umjikelezo wokuphila emisha usinciphisa ngokuphawulekayo. Isifunda ngasinye emhlabeni sibhekene nenselele ngenye iphepha noma amasu amakhono amaningi. Ngezinye izikhathi singathola imiphumela emihle emayunivesithi nasezikhungo zokucwaninga, kodwa ukuqaliswa kwalezi zinkinga zobuchwepheshe kunciphisa phansi emahlathini ehhovisi lobukhosi. Kuyinto ejabulisayo ukubona ukuthi i-Dubai ithatha kanjani ingozi ukuze ihole ngokusebenzisa i-Key Key in the technology of the future.
Qhubeka nokusebenzisa futhi ufunde kusukela ekusebenzeni.
Ubunjiniyela ekuhlukahlukeni kweNkcubeko
I-UAE yabona ukwenyuka kwamanani eminyaka phakathi neminyaka embalwa eyedlule ngenxa yokukhula okuphawulekayo emikhakheni ehlukene yezomnotho eholela ekukhunjweni kwabasebenzi abavela ezizinda ezihlukahlukene zamasiko nezenkolo. Kusukela ku-4.1 million ku-2005, inani le-UAE likhule li-8.3 million ekupheleni kwe-2010. Ngaphandle kwalokhu, inani lezakhamizi ze-UAE lingaphansi kwe-1 million (947,947). (Uhulumeni wase-UAE)
Imihlangano e-Dubai esebenza emisebenzini emisha kanye nokuzibandakanya ezintsha kukhonjiswe a ukuhlanganiswa kwezizwe ezivela emhlabeni jikelele. Amakhono, isipiliyoni kanye nesizinda samasiko zihlangene ukuze zisebenze esikhathini esizayo. Uma kuqhathaniswa namazwe afana neJalimane, lokhu kuyinkimbinkimbi ehlukene yokubambisana eqenjini. Kule mix mix multicultural, izinsika zobunikazi bezizwe zinikeza ukuzinza ukuhlala emphakathini olinganiselayo.
Isiphetho I-UAE kwi-Track Track
Ukulinganisela ukuhlukahluka kobuzwe nokuhlukahluka kwamasiko kwakha isisekelo esiqinile endleleni eya kwi-Smart Future.
Umbhali: Roland Spranz - Ukuhlanganisa iYurophu, i-Middle East ne-Afrika
Inani le-Innovation UG - iSalzatal - Germany
I-Hilal Engineering Consultancy - Sohar - iSultanate yase-Oman
Xhumanisa ku-Linkedin - UAE kwi-Track Fast
I-Dubai City Inkampani manje inikeza iziqondiso ezinhle zeMisebenzi e-Dubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho, ngalokhu engqondweni, manje ungathola iziqondiso, amathiphu kanye nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.